I Jezebela na Jezabela dia andriambavy foinikiana, zanak' i Itobaala I, mpanjakan' i Tiro sy i Sidôna. Vadin' i Ahaba mpanjakan' i Israely izay nanjaka tamin' ny taona 874 hatramin' ny 853 tal. J.K. izy. Voatantara ao amin' ny Boky voalohany sy faharoan' ny mpanjaka ao amin' ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly i Jezebela. Araka ny Baiboly dia vehivavy ratsy toetra sy mpanao ratsy i Jezebela izay nampirisika ny mpanjaka sy ny vahoaka hiala amin' Andriamanitra. Taorian' ny nahafatesan' i Ahaba dia maty natsipy avy eny amin' ny varavarankely izy ka nohanin' ny alika ny fatiny. Voalaza ao amin' ny Bokin' ny Apôkalipsy ao amin' ny Testamenta Vaovao koa i Jezebela sady aseho ho vehivavy ratsy toetra koa.
1 Ny anaran' i Jezebela
2 Ny amin' i Jezebela araka ny Baiboly
Ny anaran' i JezebelaModifier
Ao amin' ny Baiboly amin' ny teny malagasy dia Jezebela na Jezabela no mety ho fanoratana io anarana io. Amin' ny fiteny hebreo dia איזבל /ʾÎzevel na ʾÎzāvel no fiantsoana azy. Amin' ny teny grika dia Ιεζάβελ / Iedzabel na Ιζέβελ / Idzebel.
Ny amin' i Jezebela araka ny BaibolyModifier
Ny tantaran' i Jezebela dia tantaraina ao amin' ireo Bokin' ny Mpanjaka:
Vadin' i Ahaba mpanjaka i Jezebela (1Mpanj. 16.29-34), izy no nampiditra tao amin' ny Fanjakan' i Samaria ny fivavahana amin' i Baala sy i Astarte. Nanenjika ny fivavahana jiosy izy (1Mpanj. 18.4-19). Nampamono ny mpaminany Elia izay nanohitra azy izy (1Mpanj. 19.1-19).
Namporisika an' i Ahaba hanao fitondrana jadona i Jezebela. Nampangainy tsy marina i Nabota sady nampamonoiny mba hahazoany ny tanim-boalobony (1Mpanj. 21.1-16). Taorian' ny namonoana an' i Nabota dia naniraka an' i Elia Andriamanitra hamely an' i Ahaba sy i Jezebela amin' ny famonoana amin-kerisetra (1Mpanj. 21.17-26). Nefa i Ahaba nahatsiaro nanenina ka nandeferan' Andriamanitra ka tsy nosaziny nefa nilaza Andriamanitra fa hisy loza hanjo ny ankohonan' ny zanany lahy (1Mpanj. 21.27-29).
Taorian' ny nahafatesan' i Ahaba, i Jezebela dia nanjaka nandimby azy niaraka tamin' ny zanak' i Ahazia avy eo tamin' i Jorama (2Mpanj. 9.24). Nirahin' ny mpaminany Elisa hanatanteraka ny famalian' Andriamanitra i Jeho izay nanongana sy namono an' i Jorama, avy eo nampanipy an' i Jezebela avy eny amin' ny varavarankelin' ny lapa (2Mpanj. 9.33) ka nampihinanina ny alika ny vatan' i Jezebela (2Mpanj. 9.35), izany no nahatanteraka ny faminanian' i Elia.
Ny Bokin' ny Apôkalipsy ao amin' ny Testamenta Vaovao, ao amin' ny toko momba ireo taratasy alefa amin' ny fiangonana fito tao Asia Minora dia miresaka vehivavy iray atao hoe Jezebela izay lazaina fa mpaminany sandoka: mampianatra sy mampivily ny mpanompon' i Jesoa Kristy:
"18 Ary soraty ho amin' ny anjelin' ny fiangonana any Tyatira: Izao no lazain' ny Zanak' Andriamanitra, Izay manana maso toy ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina manganohano: 19 Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. 20 Kanefa manan-teny aminao Aho, satria ianao mandefitra amin' ilay vehivavy Jezebela, izay milaza ny tenany ho mpaminanivavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin' ny sampy." (Apo. 2.18-20, Ny Baiboly)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jezebela&oldid=1036784"
Dernière modification le 30 Aogositra 2021, à 10:17
Voaova farany tamin'ny 30 Aogositra 2021 amin'ny 10:17 ity pejy ity.